SMPTE 2017 Symposium Program to Delve Into AI and Machine Learning in Digital Media XCHARX NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
ikhaya » iindaba » I-SMPTE I-2017 Symposium Programme yoLungula kwi-AI kunye noFundo lweeMveliso kwi-Digital Media
I-SMPTE I-2017 Symposium Programme yoLungula kwi-AI kunye noFundo lweeMveliso kwi-Digital Media
I-WHITE PLAINS, NY-Sept. 8, 2017 - SMPTE(R), intlangano enemigangatho yokusebenza ixhase ikhulu leminyaka yentuthuko kwezobuchwepheshe, namhlanje ivakalise inkqubo SMPTE I-2017 Symposium: "I-Intelligence Intelligence (AI) kunye neNkalo yokuFundela iMicrosoft kwiMedia Media Creation: I-Promise, The Real, kunye ne-(Scary?)." Isiganeko se-Oct. 23, esiya kwenzeka hollywood & Highland Centre Hollywood, California, ngokukhawuleza kuqala kuqala SMPTE I-2017 INgqungquthela Yomsebenzi Yonyaka Yomsebenzi kunye neMiboniso (SMPTE 2017).
"Siyaziqhenya ngokukrakra ngeentetho ezimangalisayo esizibandakanye kulo mcimbi," kuchaza SMPTE I-Vice-President weMfundo uRish Welsh, i-CEO ye-Sundog Media Toolkit. "Ubuninzi nobubanzi bobuchule babo buya kunika i-Symposium abafundi imbono ephosakeleyo kwihlabathi elitsha elinesibindi se-AI kunye nokufunda komatshini."
Uphethwe ngu-Co SMPTE Omnye uMichelle Munson, umqambishelana waseAspera, kunye noYvonne Thomas, umphathi weemveliso Arvato Systems, i SMPTE I-2017 Symposium iya kuhlola indlela i-AI kunye nobuchwephesha bokufunda (ML) ubuchwephesha bafumene umkhondo omkhulu ekudalweni kweendaba zedijithali. Iingcali zezifundo, ababonisi, kunye neenkokeli ezicingayo kwintsimi ziya kuncedisa abahambayo ekusekeni isiseko esiqinileyo sokuqonda olu bugcisa, oluya kuphazamisa ekugqibeleni i-industry kunye nezozonwabisa.
UMunson noTomas baya kuvula inkqubo kwi-9 kunye neWelsh kunye SMPTE UMongameli Matthew Goldman, oyintloko oyintloko kumongameli we teknoloji, ukunyanzeliswa kweTV, kwi Ericsson. Okulandelayo, isiWelsh siza kubonisa "Ukuqonda i-AI, i-Analytics, kunye nokuFunda kweMishini," uqeqesho olubonisa ubu buchwepheshe njengengaphezulu kwezinto ezilungelelaniso kwaye kunokuba zizinto ezibalulekileyo kwi-network ye-ML yokuzalisa iziphumo.
UJeff Kember, umlawuli wezobugcisa kwi-ofisi ye-CTO e-Google, uya kuhambisa idilesi ebalulekileyo kwi-9: 45 Ngaba uya kuxoxa ngamathuba amva kunye nokuqhubela phambili kwi-ML, kwaye indlela i-AI neML edala ngayo ikamva leendaba shishini lo lonwabo.
Idilesi yokubhaliweyo yeKember iya kulandelwa yiseseshoni "Indlela iinguqu zeDivigual Change iguqula iMidiya nezoLonwabo ngeeMishini yokuFundela, uLwazi kunye noLwazi lweNkcukacha kunye neHeterogeneous Integrated Workflows," echazwe nguJay Yogeshwar, umlawuli, abeendaba kunye nokuzonwabisa kwiHitachi Data Systems. I-Yogeshwar iya kuchaza imingeni yoshishino kunye nezozonwabisa ezithintekayo ekujonganeni nokuhlanganiswa kwedatha kunye neendlela zobulumko ukuze zenze imisebenzi yokusebenza ngokuzenzekelayo, ngenjongo yokuguqulwa kwenguqu yedijithali yokudalwa kwendalo kunye nokuhanjiswa kwezinto.
Ngokulandelayo, kwiseshoni yakhe "Ukuxela iHlabathi ngeeNkonzo zeMedia Analytics," uSihlalo we-Symposium Co-chair uTomas uya kuchaza indlela i-media intelligence esekelwe kuhlalutyo olukhulu lweedatha kunokwandisa ukusebenza kakuhle kwimizi yokusebenza yamaphephandaba kunye nokuncedisa ukwenza imisebenzi yokwenza imali ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo. Iindwendwe ezibalulekileyo zabafundi ziya kubandakanya indlela yokucebisa imethadatha kunye nezigqibo zokuvelisa izikhokelo; indlela yokuqinisekisa ukuthembeka kweenkcukacha ze-AI kunye nokunyusa uomatshini bokufunda; kunye nendlela yokujonga ngayo kwaye unikeze ixabiso elikhulu lwedatha ngendlela eyenza i-workflows iphumelele ngakumbi.
Inkqubo yesondlo iya kugqitywa ngokuthi "Ukuguqulelwa kweMatshini yombhalo oqingqiweyo: Umshini wam unokufunda ngokukhawuleza kunami," owenziwe nguChris Reynolds, umongameli welizwe, ubudlelwane behlabathi, iteknoloji kunye neendlela ezintsha, iQela leeNkonzo zoLuntu zeDeluxe; kunye noGreg Taieb, umlawuli ophezulu, uSfera kwiQela leeNkonzo zoLonwabo lweDeluxe. URenynolds noTayeb baya kunika imizekelo kunye nezifundo zecala ezibonisa imida yokukhangela iteknoloji yamashishini ngelixa ihlola kwakhona indlela iML inokuphunyezwa ngayo ukuphucula umgangatho weenguqulelo rhoqo. Ukongezelela, baya kuhlola indlela imeko yangoku yokuguqulela ngomatshini inokuthi ichithwe ngayo ngokusebenzisa izicelo zewebhu ezisekelwe kwifu ukusiza abaguquleli babantu kwaye zilethe amanqanaba aphezulu emgangathweni kunye nokusebenza kakuhle kwiindawo zokusebenzela ezikhoyo kwividiyo.
Ukulandela isidlo sesidlo sasemini, i-Symposium iya kuphinda ihlangane kunye neengxoxo ezimbini zecandelo elijoliswe kwi-ML kwaye linikezelwe SMPTE Usihlalo weSihlalo kunye noSomposium Munson. Kwinqanaba elinye, "i-Machine Learning Foundations (Theory and Practice)," uMunson uza kunika isiseko kwiingcali zedijithali zedijithali kwiinkalo ze-ML zezifundo: ukuba ziphi, ukuqaliswa kwiiklasi zolawulo zombini kunye nezisimo zokufunda ezingaqinisekanga, kunye nemizekelo kwezi ndlela zenziwa ngokukhokela phambili-ophezulu (OTT) kunye neeteknoloji zokuhanjiswa kweendaba. Inxalenye emibini, "Ukusebenzisa iMandla yokuFunda ukuXela iMithombo eQinisekayo yokuNxibelelwaniswa kwiNethiwekhi yeHeterogeneous," uMunson uza kuchaza i-algorithm entsha ye-ML kunye nokuphunyezwa okuqhubekayo ukuguqulwa kwamanye amazwe okukunceda ukuqikelela umthombo ophezulu kakhulu intanethi yokugcina indawo.
Kwiseshoni elandelayo, "iSicwangciso seMicrosoft New Analytics Platform - I-Akhawulwayo ye-Turnkey ye-Turnkey ye-Cloud Service ye-Cloud Service ye-Understanding Scalable Turnkey." UMartin Wahl, umphathi wepropati yecandelo leeNkonzo zeMicrosoft Azure, uya kubathabatha abaphulaphuli ngokusebenzisa ubuchule be-AI entsha. i-video-based-indexing service kunye nokunika umbono kwiimodeli zayo zokufunda umatshini kunye nezinkonzo zokuqonda.
I-Konstantin Wilms, isisombululo sezobuchule kwi-Amazon Web Services, iya kulandelwa kunye ne "Content Intelligence kwi-AWS - Ukuhlanganiswa koBulumko bobugcisa kunye noTechnology Learning Technologies kwi-Media Basedflows esebenzisa i-Cloud." Lapha, iWilms iya kuthatha i-AI kunye ne-ML kwi- ilifu, ukubonisa indlela ezobuchwepheshe kunye neenkonzo ezingasetyenziselwa ngakumbi ukuphucula imveliso yomxholo omtsha nekhoyo.
The SMPTE I-2017 Symposium iya kugqiba ngengxoxo yenkomfa, "I-AI ye-AI-Indlela ye-AI engayitshintsha ngayo ishishini lethu." Iipanelist ziza kuxubusha indima ekhulayo ye-AI kwishishini, eqhutywa yinkalo yokuba neenkcukacha ezinkulu kunye nokukwazi ukuqhuba nokuqonda idatha. Iphaneli iya kubonisa imbono emitsha kwi-business media ye-AI, kubandakanywa nendlela yokwenza imali kunye nemingeni ejongene nabantu "ekulawuleni oomatshini."
I-Symposium yinto ebathandayo ye SMPTE INgqungquthela yoBugcisa yonyaka kunye neMiboniso, iforum yehlabathi kwiqonga lokuhlola uphuhliso lweendaba kunye nezobugcisa. Ukubhaliswa kwe-Symposium kufakwe kunye nokukhetha SMPTE Iiphakheji zeenkomfa ze-2017, njenge-add-on, okanye njengobhaliso olumeleyo. Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga neSomposium ziyafumaneka Www.smpte2017.org/ai-ml-symposium.html.
Ezinye iziganeko ezenzeka ngoMsombuluko, ngo-Oktobha 23 ziquka i-Women's Technology kwiLuncheon yonyaka SMPTE kwaye hollywood Umbutho wobuNtu (HPA) Abasetyhini kwi Post, kunye SMPTEI-HPA yabaFomenti beFilimu, eliza kugxininisa ukusetyenziswa kobuchwephesha ukuxhasa ubugcisa kunye nobugcisa bokubhala ibali. Iikitikiti zezo ziganeko zifunwa kwaye zingathengwa kunye nokubhaliswa kwenkomfa okanye njenge-standalone, ukubhaliswa kwethekiti kuphela.
Ukususela ngoLibini, Oktobha 24, ukuya kuLwesine, Oktobha 26, SMPTE I-2017 iya kugcwalisa iibholo ezimbini kunye neeklasi ezininzi zeseshoni hollywood & Highland Centre. Esi siganeko siza kufumana i-Oktoberfest ukwamukelwa, i-Broadcast Beat SMPTE 2017 Live! I-Studio, kunye neziganeko ezizodwa ezigqityiweyo SMPTE IiGrafa zonyaka zamaGala kwiLoews hollywood Ihotele hollywood I-Ballroom ngokuhlwa ngo-Oktobha 26.
Gcwalisa ulwazi malunga SMPTE I-2017 iyafumaneka Www.smpte2017.org. Ulwazi olungakumbi malunga SMPTE Kunye nemigangatho yalo msebenzi ifumaneka kwi-www.Smpte.org.
Kwiminyaka engaphezu kwekhulu, abantu ba SMPTE (Ebizwa ngokuthi "lula-tee") uye wahlenga iinkcukacha ezininzi zophuhliso ezibalulekileyo kwezobugcisa kunye noononophelo lwezobugcisa, ukususela kwi-"talkies" kunye nomboniso wombala HD Kunye ne-UHD (4K, 8K) iTV. Ukususela ekusekeni kwayo kwi-1916, SMPTE Ufumene i-Oscar (R) kunye ne-Emmy (R) amanqaku amaninzi ngomsebenzi wayo ekuqhubekisweni phambili kwezobunjineli bezobugcisa kulo lonke shishini. SMPTE Uye wavelisa amawaka emigangatho yemigangatho, iinkqubo ezicetyiswayo kunye nezikhokelo zobunjineli, ngaphezu kwe-800 ezo zisebenza namhlanje. SMPTE I-Code Code (TM) kunye nobuninzi SMPTE Imibala yeBhara (TM) yimizekelo emibini kuphela SMPTEMsebenzi ophawulekayo. Njengoko ingena kwinkulungwane yesibini, SMPTE Udala isizukulwana esilandelayo semigangatho kunye nokubonelela ngemfundo kwishishini ukuqinisekisa ukusebenzisana njengoko ishishini litshintsha ngakumbi kwi-IT-based workflows.
SMPTEUbulungu behlabathi namhlanje luquka amalungu angaphezu kwe-7,000: abaphathi be-motion-imaging, abadaliweyo, abachwephesha, abaphandi kunye nabafundi abazinikela ngokuzinikela ixesha labo nobuchule SMPTEImigangatho yokuphuhliswa kunye namanyathelo emfundo. Ubambiswano kunye hollywood Umbutho wobuNtu (HPA) udibanisa SMPTE Kunye nobulungu balo namashishini nabantu ngabanye abaxhasa ukudala nokugqiba umxholo weendaba. Ulwazi malunga nokujoyina SMPTE Iyafumaneka kwi-www.Smpte.org / ujoyine.
Zonke iimpawu zokuthengisa ezibonakala apha ziyimpawu zabanikazi babo.
X Link: Www.wallstcom.com/SMPTE/170908SMPTE.docx
Ifoto Imifanekiso: UJeff Kember, SMPTE 2017 Symposium Keynote Somlomo
Ifowuni yamagama: Michelle Munson, SMPTE Usihlalo kunye no2017 Symposium Co-chair
Ifowuni yamagama: Yvonne Thomas, SMPTE I-2017 Co-chair Co-chair
Yabelana nge Twitter: twitter.com/intent/tweet?text=.%23SMPTE2017%20Symposium%20program%20to%20delve%20into%20%23AI%20and%20%23machinelearning%20in%20%23digitalmedia%20-%20https://goo.gl/2SdU7F%20@smpteconnect
I-Globosat ikhetha iHarmonic ye-Live UHD Ukusasazwa kwe-International Football Tournament - Julayi 13, 2018
I-Biamp iyandisa utyalo-mali kwiNgingqi yaseYurophu - Julayi 12, 2018
I-Yamaha Unified Communications Izisa iNkqubo entsha yoBambiswano - Julayi 12, 2018
IiNkonzo ze-Amazon Web Systems Arvato Aspera Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Iqela leenkonzo zoLonwabo lweDeluxe Ukuhlahlela kwiAI Digital Media Iingcali ezivela kwiGoogle ukudityaniswa U kufunda SMPTE I-SMPTE 2017 Symposium Programme SoftAtHome, MStar, iCES2017 ITeknoloji yeTV Inkundla ye-Ultra HD Injini yeVidiyo ndiphila	2017-09-08
Previous: Ubusuku be-Midnight Sherpa Partners kunye noJanice W. Ukuqulunqa kwiiNtsebenzo zoPhuhliso lweZoshishino
next: I-IP Interop Isingathi, i-Virtualization yiNyathelo Elilandelayo
Hey Buddy !, Ndiyifumene nale ngcaciso: "I-SMPTE 2017 Symposium Programme yokuhlaziya kwi-AI kunye nokuFundiswa kweMishini kwi-Digital Media". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/smpte-2017-memposium-program-to-delve-into-ai-and-machine-arning-in-digital-media/. Enkosi.